Mika Live Chat Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Mika Live Chat Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update]
Salama daholo, te hahazo vola ve ianao rehefa mankafy ny tenanao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android, antsoina hoe Mika Live Chat. Izy io dia sehatra media sosialy, izay ahafahanao mijery Streams, ary miresaka amin'ny olona, ​​ary afaka mandefa horonan-tsary mivantana koa ianao hahazoana vola.
Araka ny fantatrao, ny olona dia tia mahita sy mihaona vaovao. Noho izany, misy fampiharana Android samihafa novolavolaina mba hihaona amin'ny olona. Afaka mahita fampiharana Android ianao, izay azonao jerena sy alaina miaraka amin'ny olona samihafa manerana izao tontolo izao.
Saingy matetika, ireo rindranasa rehetra ireo dia manolotra fidirana feno karama, midika izany fa mila mandoa vola ianao hiresahana amin'izy ireo. Misy tolotra fampiharana maimaimpoana hafa, izay manolotra olona sandoka sy mandeha ho azy. Noho izany, ny fomba sarotra dia ny mahita fampiharana tena izy, izay manolotra atiny tena izy.
Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahavariana ity, izay ahafahanao mahazo vola amin'ny alàlan'ny fisakaizana. Misy endri-javatra maro hafa ao, izay ahafahanao mahazo fialamboly tsara indrindra. Noho izany, sintomy izany ary atombohy ny fikarohana azy io na mijanona miaraka aminay ary zahao miaraka aminay.
Topimaso momba ny Mika Live Chat App
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'ny Gmancal Studio. Sehatra media sosialy izy io, toerana anaovan'ny olona manerana an'izao tontolo izao azy. Afaka mifampiresaka mivantana sy mahazo namana ary mizara hevitra sy fahalalana ny mpampiasa. Misy zavatra mahafinaritra kokoa azonao atao amin'ny fampiharana ity.
Tamin'ny voalohany, App mampiaraka manome ny mpampiasa hanao namana sy hiresaka aminy fotsiny. Mika App dia manolotra serivisy mora, mila mikoriana ho an'ny namana fotsiny ianao ary manampy azy ireo. Afaka mifampiresaka manokana amin'izy ireo ianao ary raha te hiresaka amin'ny vondrona ianao dia afaka miditra amin'ny vondrona misy ihany koa.
Ny fandefasana mivantana dia iray amin'ireo endri-javatra malaza indrindra amin'izany. Amin'ity fizarana ity dia afaka mahita streamer samihafa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ianao. Azonao atao ny manampy amin'ny stream ary mahazo ny fahalalana nozaraina avy amin'ny streamer. Azonao atao ny mandefa fanomezana maimaim-poana sy voaloa ho an'ny streamers.
Raha te ho streamer ianao dia azo atao ihany koa. Ilainao fotsiny ny manosika ny laharanao ho amin'ny ambaratonga 10, satria raha vao manomboka ny stream rehetra dia tsy maintsy manana laharana 10 na ambony ny mpampiasa. Ny streaming no ampahany, hahazoana vola amin'izany. Raha vao manomboka streaming ianao dia hanao mpankafy ary hahazo fanomezana sy vola madinika.
Ireo fanomezana sy vola madinika rehetra ireo dia afaka manavotra amin'ny vola tena izy. Izy io koa dia manome fomba azo antoka hamindrana ny vola azonao tamin'ny fampiharana ity. Izy io dia manohana ny fomba fandoavam-bola Google, izay ahafahanao manao fifanakalozana.
Mika Chat Apk koa dia manome magazay voaorina, izay misy vokatra samihafa. Ireo vokatra rehetra ireo matetika dia azo ampiasaina hananganana mombamomba mahaliana na hividianana fanomezana ho an'ny hafa. Manolotra interface tsotra izy io, izay mora ampiasaina sy takatry ny mpampiasa. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazoa fidirana tsy voafetra mankany amin'ny fampiharana media sosialy tsara indrindra.
anarana Mika Live Chat
Anaran'ny fonosana com.mikaapp.android
Saika nozarainay taminareo rehetra ny fiasa ato amin'ity rindrambaiko ity, saingy misy mihoatra ny hitanareo ao amin'ity fampiharana ity. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany. Ao amin'ny lisitra etsy ambany, dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity aminareo rehetra izahay.
Misy fanomezana maimaim-poana sy karama
Serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera
Mivezivezy ary mahazo vola
Manana fampiharana hafa mitovy aminao izahay.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io ary mizara rohy azo antoka sy miasa an'ity fampiharana ity koa izahay. Noho izany, azonao atao ny misintona an'ity fampiharana ity amin'ity pejy ity, mahita fotsiny ny bokotra fampidinana ary paompy. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Mika Live Chat no fampiharana tsara indrindra hihaonana sy hahitanao olona mahatalanjona eran'izao tontolo izao. Azonao atao koa ny ho malaza amin'ny fanaovana streaming video. Sintomy fotsiny ity rindrambaiko ity ary mahazo vola rehefa mankafy miresaka. Raha mbola manana fanontaniana momba izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Apps, Social Tags App mampiaraka, Mika Live Chat, Mika Live Chat Apk, Rindrambaiko Mika Live Chat Post Fikarohana
APK CONFIG FF fampidinana fampiharana ho an'ny Android 